Microsoft mandefa xCloud ho an'ny iPhone sy iPad amin'ny dingana beta | Vaovao IPhone
Microsoft mandefa xCloud ho an'ny iPhone sy iPad amin'ny beta
Toni Cortés | 19/04/2021 21:00 | maro
Microsoft sy Apple dia milalao saka sy totozy. Ny lalao streaming Xbox dia azo nilalao tamin'ny fitaovana Android nandritra ny herintaona tamin'ny fampiasana ny fampiharana xCloud. Noraràn'i Apple ny fampiharana satria tsy afaka "mifehy" ny atin'ny lalao eo amin'ny lampihazo.
ankehitriny Microsoft miverina amin'ny enta-mavesatra manolotra ny sehatra filalaovany ho an'ny mpampiasa iPhone sy iPad amin'ny alàlan'ny Safari fotsiny na amin'ny tranokala mifanaraka aminy. Andao hojerentsika izao ny fihetsik'i Apple….
Vao nandefa ny sehatra filalaovana streaming i Microsoft xCloud ho an'ny mpampiasa iPhone sy iPad. ny zava-baovao dia tsy ilaina ny fampiharana manokana, satria lalaovina amin'ny alàlan'ny tranonkala rehetra izany. Amin'izao fotoana izao dia ao anaty beta izy io.
Manomboka rahampitso dia manomboka mandefa fanasana ho an'ireo mpikambana voafantina ao amin'ny Microsoft Xbox Game Pass Ultimate hizaha toetra beta voafetra an'ny Xbox Cloud Gaming ho an'ny iPhone, iPad, ary PC Windows 10 mampiasa browser Internet. Hisy hatrany ny fanasana ho an'ireo mpilalao avy amin'ny firenena 22 samihafa.
Ny sehatra filalaovana streaming vaovao dia ho hita ao amin'ny xbox.com/play, ary hitohy Safari, Google Chrome ary Microsoft Edge. Mikasa ny "hisotro ronono haingana" ny andrana andrana beta voalohany i Microsoft, ary hisokatra amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny Xbox Game Pass Ultimate amin'ny volana ho avy. Ny lalao dia azo lalaovina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso na fanaraha-maso mikasika eo amin'ny efijerin'ny fitaovana.
Io no toa xCloud amin'ny browser.
Herintaona lasa izay fa Microsoft aorian'ny mpampiasa Apple dia afaka manolotra azy ireo ity serivisy ity. Ny tetikasany dia nisy fihemorana matotra satria tsy afaka nandefa fangatahana ho azy tao amin'ny App Store. Ny lalàna Apple App Store dia mandrara ny fampiharana tsy handefa lalao marobe amin'ny rahona amin'ny alàlan'ny fampiharana tokana.
Izany dia satria mino i Apple fa tsy mahay mandinika ny lalao tsirairay ao amin'ny tranomboky ny serivisy streaming dia mety hitera-doza ho an'ny fiarovana ny mpampiasa azy. Ny streaming Game Pass dia ho velona raha misy ny lalao tsirairay amin'ny fampiharana azy manokana araky ny fitsipiky ny Apple.
Ity dia fialan-tsiny tena ratsy amin'ny an'i Apple noho ny tsy famporisihana ny fifaninanana avy amin'ny Apple Arcade. Izay mamela ny fampiharana avy amin'ny karazana sehatra hafa, toa ny Netflix, ohatra, tsy afaka mifehy ny atiny.
Ny tiana hambara dia toa izany Microsoft dia afaka nanodinkodina io "fanakanana" nataon'i Apple io, ary afaka mankafy ny lalao amin'ny sehatra amin'ny iPhones sy iPads antsika isika, ary ambonin'izany rehetra izany, amin'ny alàlan'ny Safari, ny tranokala teratany Apple.
Izao ihany isika miandry ny dingana beta hahavita, hahafahanao mankafy lalao Microsoft zato mahery amin'ny fitaovantsika noforonina tany Kalifornia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Microsoft mandefa xCloud ho an'ny iPhone sy iPad amin'ny beta